Tuugo dadka baad kaga Qaadi jirtay magaca Argagixisada Al-Shabaab oo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Tuugo dadka baad kaga Qaadi jirtay magaca Argagixisada Al-Shabaab oo
Maxamed Cali Cabdi Isxaaq iyo Axmed Yaasiin Xaaji Gaabow, oo loo haystay in ay dadka baad kaga Qaadi jireen magaca argagixisada Al-shabaab, kuwaa Afduubka u geeystay dhowr qof si ay madax furasho ka qaateen ayaay maanta xukuntay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Maxamed Cali Cabdi Isxaaq iyo Axmed Yaasiin Xaaji Gaabow ayaa isticmaali jiray SIMCARD SOMNET ah oo ay ganacsatada Soomaaliyeed ku waydiisanjireen Bixinta lacagaha ay Argagixisada ka qaaddo shacabka Soomaaliyeed.
Intii ay wadeen Howshan waxa ay sameeyeen dhowr Afduub oo ay u gaysteen Hablo Soomaaliyeed iyaga oo ka qaatay lacag u dhexeyso kun ilaa laba kun oo dolarka Maraykanka, waxa ay sidoo kale Eedeysanayaasha sheegteen in ay ku qaadi jireen baadda magaca maleeshiyaadka Al-shabaab oo ay dhowr jeer ugu suura gashay helidda lacagtaas, sidokale waxaay dadka ku kalifi jireen in ay ku ballamiyaan Masaajidda iyo Xaafado ku yaallo Cirifyada Muqdisho iyo suuqa wayn ee Bakaaraha.
Mid kamid ah dhibanayaasha Goobjoogga u ahaa Maxakamadaynta labada Eedeysana ayaa u sheegtay Garsoorka in ay kaga shakisay labadaba Gor-gortanka lacagta sidaasna ay ku war geliyeen Ciidamada Amniga gaar ahaan Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka oo soo qabtay labadan eedeeysane, dabayaaqadii bishii May ee sanadkan.
July dabayaaqadeedii ayaa lagu soo wareejiyay eedeysanayaasha Maxkamadda, waxaanna xilligaasi Xafiiska Xeer Ilaalinta oo awood u leh dhaqaajinta Dacwaddan ay ka Codsadeen Maxkamadda in Eedeysanayaasha Xabsiga Dhexe lagu hayo Garsuge ahaan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa ka codsaday in loo ciqaabo dambigii ay galeen Maxamed Cali Cabdi Isxaaq iyo Axmed Yaasiin Xaaji Gaabow, oo iyaga Muqdisho ka abuuray weji cusub oo u baahan in ladabar jaro.
Xeer Ilaaliye Maxamed Cabdullaahi Khaliif, ayaa u sheegay Garsoorka in Eedeysanayaasha ay xittaa ku handadi jireen dadka ay Afduubtaan ee lacagaha ay ka qaadaan in Gaariga ay ku xiran-yihiin walxaha Qarxa oo hadii ay dhaq-dhaqaaq sameeyaan taas oo ay ka dhalan karto in ay wada Qarxaan middaas oo u fududayneysa in ganacsatada ah ay ka saaraan Magaalada.
Previous articleMadaxweyne Biden oo beeniyay Warar laga faafiyay
Next articleDanjire Cawaale Cali Kullane oo ka qeyb galay kulan looga hadlayay xiriirka Shiinaha iyo Carabta